ပင်မစာမျက်နှာ - ကြောငျးနှငျ့ပညာရေး - ကျောင်းစနစ် - Goethe-Institut
Birmanisch عربي Bosanski 中文（繁體) Deutsch English Español فارسي (Persisch) Français Bahasa Indonesia Khmer 한국어 دةستثيَك (Kurdi) Македонски Português Русский Shqip Srpski [Thai] Tigrinya Tagalog Türkçe Українська Tiếng Việt 中文（简体)
ပင်မစာမျက်နှာ > ဂျာမဏီနိုင်ငံတွင် နေထိုင်ခြင်း > ကြောငျးနှငျ့ပညာရေး > ကျောင်းစနစ်
ပည်သူများ၏ ရပိုင်ခွင့်များနှင့် ပြည်သူ့ဘဝ
မတက်မနေရ ကျောင်းတက်ခြင်းနှင့် ကုန်ကျစရိတ်များ
ဂျာမဏီနိုင်ငံတွင် ကျောင်းမတကမ် နေရ တက်ရပါသည်။ ကလေးငယ်များသည် ကျောင်းကို ၉နှစ် တက်ရောက်ရမည် ဖြစ်သည်။ အချို့သော ပြည်ထောင်စုပြည်နယ်များတွင် ကျောင်းမတက်မနေရ အစီအစဉ်သည် နေထိုင်မှုအဆင့် ရှင်းလင်းမှုမရှိသည့် ကလေးငယ်များအတွက်လည်း အကျုံးဝင်ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်ပေါ်မူတည၍် စာသင်နှစ် တစ်နှစ်သည် သြဂုတ်လ သို့မဟုတ် စက်တင်ဘာလတွင် စတင်ပြီး နောက်နှစ် ဇွန်လ သို့မဟုတ် ဇူလိုင်လတွင် ပြီးဆုံးပါသည်။ ကလေးများသည် အစိုးရက ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပေးထားသည့် ကျောင်းများတွင် တက်ရောက်လေ့ရှိသည်။ မည်သူမျှ ကျောင်းလခမပေးရပါ။ မိတ္တူစာရွက်များ၊ ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ပြင်ပခရီးထွက်ခြင်းတို့အတွက်သာ ငွေအနည်းငယ် ကောက်ခံပါသည်။ ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းများတွင်မူ သင်သည် ကျောင်းလခပေးရပါသည်။
ကျောင်းအမျိုးအစား အမျိုးမျိုးရှိပါသည်။ ကလေးများအားလုံးသည် အသက် ၆နှစ် သို့မဟုတ် ၇နှစ်မှစတင်ကာ မူလတန်း တက်လေ့ရှိပါသည်။ ၄နှစ်တက်ရောက်ပြီးနောက် ကလေးများသည် အထက်တန်းကျောင်းသို့ ပြောင်း၍ တက်ရောက်ပါသည်။ အထက်တန်းကျောင်းမျိုးစုံရှိပါသည်။ သင်၏ ကလေးမည်သည့်ကျောင်းသို့ မည်သည့်အချိန်တွင် တက်ရောက်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုသည်ကို မူလတန်းကျောင်းက ပြောကြားပေးလေ့ ရှိပါသည်။ Hauptschule (သက်မွေးအထက်တန်းကျောင်း-၅တန်းမှ၉တန်းအထ)ိ ကျောင်းလည်းရှိပါသည်။ယင်းကျောင်းတွင်သင်သည် Hauptschulabschluss နောက်ဆုံးကျောင်းထွက် လက်မှတ် သို့မဟုတ် ပညာကို ဆက်လက်သင်ယူရန် အရည်အချင်းပြည့်မီကြောင်း ထောက်ခံပေးသည့် လက်မှတ် ရနိုင်ပါသည်။ Hauptschule တွင် သစ်ထည်/သတ္တုထည် ပစ္စည်း သို့မဟုတ် နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာပုံဆွဲခြင်းစသည့် လက်တွေ့ဘာသာရပ်များကိုလည်း ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။ ယင်းထက် အဆင့်မြင့်သော ကျောင်းမှာ Realschule (အလယ်အလတ် အထက်တန်းကျောင်း - ၅တန်းမှ ၁ဝတန်းအထိ) ကျောင်းဖြစ်သည်။ ယင်းကျောင်းတွင် သင်သည် Realschulabschluss (အလယ်အလတ် အထက်တန်းကျောင်း ဒီပလိုမာ) ရရှိပါသည်။ Hauptschule သို့မဟုတ် Realschule တက်ရောက်ပြီးစီးပါက သင်သည် အဆင့်မြင့်သက်မွေးမှုပညာသင်ယူနိုင်ပါသည်။ထို့နောက်Gymnasium(သဒ္ဒါကျောင်း-၁၂တန်းအထ)ိ ရှိပါသည်။ ယင်းကျောင်းတွင် သင်သည် Abiturသင်ယူနိုင်ပြီး၊ သင်ယူပြီးစီးပါက တက္ကသိုလ် ဆက်တက်ရန် အရည်အချင်း ပြည့်မီကြောင်း ထောက်ခံပေးပါသည်။ Gymnasium တွင် သင်သည် အင်္ဂလိပ်နှင့် ပြင်သစ် နိုင်ငံခြားဘာသာစကား၂မျိုး သို့မဟုတ် ၃ မျိုး သင်ယူနိုင်ပါသည်။
အချို့သောပြည်နယ်များတွင် သူတို့သည် Gesamtschule (လူတိုင်း အကျုံးဝင်ကျောင်း)ထားရှိပါသည်။ ယင်းကျောင်းတွင် Hauptschule၊Realschule နှင့် Gymnasium တကိုို့ အဆောက်အအုံတစ်ခုတည်းတွင် ပေါင်းစပ်ထားပါသည်။ အကယ၍် ကလေးတစ်ယောက်က ကျောင်းပြောင်းလသို ည်ဆိုပါက ဥပမာHauptschule မှ Realschule သို့ ပြောင်းပါက ပိုမိုလွယ်ကူပါသည်။ အကယ်၍ ကျောင်းများသည် သီးခြားစီလည်း ဖြစ်နေပြီး တစ်ဆက်တည်းလည်း မဟုတ်ပါက ကျောင်းပြောင်းနိုင်ပါသည်။ ပြည်နယ်တိုင်းတွင် နှစ်ဘာသာသင်ကျောင်းများ၊ အထူးကျောင်းများ၊ အထူးပြုဘာသာရပ် ပညာရပ်သင်ကျောင်းများနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်း ကောလိပ်များလည်းရှိပါသည်။
ကျောင်းအများစုတွင် စာသင်ကြားချိနသ် ည် မွန်းတည့် သို့မဟုတ် နေ့ခင်းစောစော (မွန်းလွဲ ၂နာရီ သို့မဟုတ် ၃နာရ)ီ တွင် ပြီးဆုံးပါသည်။ ယင်းနောက် ကလေးများသည် ကျောင်းဆင်းပြီး ကလေးထိန်းကျောင်းများသို့ သွားတက်နိုင်ပါသည်။ သူတို့သည် ယင်းကျောင်းများတွင် မွန်းလွဲပိုင်းတစ်ခုလုံး တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ သူတို့အား
The children learn many subjects in school. This includes PE lessons. At primary school they often are not taught in gender groups. So boys and girls do PE together. There are often swimming lessons as well. Most schools have Christian religion lessons. But you can opt out of religious studies, and attending the lessons is not mandatory. Ethics is offered as an alternative, and in some schools there is tuition in other religions (for instance Islam or Judaism).
School students usually go onaclass trip onceayear. It is usually 3-5 days. The class travels toadifferent city or location together. There are also field days. The children go on an excursion together. Doing this enables them to learn about history, culture and nature. The schools also stage school festivals. These feature play performances or concerts by pupils for instance.
Every school has parent representatives – i.e. parents who work together with the school. There are parents’ evenings several timesayear. The parents are given important information by the teachers at these evenings, and have an opportunity to get to know each other. They can also make an appointment withaspecific teacher foraprivate meeting. This isaparent consultation. This can be done if there are problems in school. Or maybe the parents want to find out how the child is doing at school. -->
ပင်မစာမျက်နှာ | ဂျာမန်ဘာသာစကားကို လေ့ကျင့်ပါ | ဂျာမဏီနိုင်ငံတွင် နေထိုင်ခြင်း | အကူအညီရယူခြင်း | အမေးများသော မေးခွန်းများ | ခက်ဆစ်များ